Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » दक्षिण अफ्रिकी अनुभवको सन्दर्भमा जननेता भण्डारी र जबज
दक्षिण अफ्रिकी अनुभवको सन्दर्भमा जननेता भण्डारी र जबज
०४९ सालको अन्त्यतिर कम्युनिस्ट पार्टिको युवा महासचिवको रुपमा उहाँ एमालेको महासचिव फेरी चुनिनु भयो । त्यति नै खेर दक्षिण अपि्रुकामा एक थिए कि्रस हानी- कम्युनिस्ट पार्टिका युवा महासचिव ! उनी लोकप्रीय थिए र दक्षिण अपि्रुकाको संक्रमणकालिन राजनीतिलाई संस्थागत गर्न नेल्सन मण्डेलासंगै कि्रशिल थिए । उनको नृसंस हत्या भयो । जननेता भण्डारीको पनि त्यतिखेर कि्रस हानीसंग तुलना हुन थालेको थियो । केही महिना को वीच मै उहाँको पनि हत्या भयो !
हामी नेपालीहरु दक्षिण अपि्रुका भन्ना साथ असलै असल काम फत्ते गर्न सक्ने नेताहरुको देशको रुपमा बुभुछौं । रंगभेदवादी शासनसंग लामो लडाई लडेर संविधानसभा मार्फत संभवतः आजसम्म कै अनुकरणीय संविधान बनाउने देश हो दक्षिण अपि्रुका ! त्यसैले पनि हुनसक्छ हामी त्यहाँको धेरै कुराको ‘अनुकरण’ समेत गर्न पुग्छौं ।
>> पिडिएफ (pdf) फाइल डाउनलोड गर्नु होस् । Remebaring madan
२०४६ साल अघि निरँकुश राजतन्त्रद्वारा थोपरिएको तानाशाही पाचायती व्यवस्था थियो । त्यो समयमा दक्षिण अपि्रुकाको एउटा एकान्त टापुमा नेल्सन मण्डेला लामो कारावास खेपी रहेका थिए । उनको रिहाईमा विश्वव्यापी रुपमै प्रचार अभियान चलिरहेको थियो । त्यति नै खेर राजतन्त्र विरुद्ध चर्चित झापा विद्रोहमा हतियार उठाउने नेता मोहचनद्र अधिकारी पनि पाचायती शासकद्वारा थोपरिएको लामो जेल सजायँ काट्दै थिए। त्यतिखेरको लडाकू कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मा-ले ले उनको रिहाईमा जनपरिचालन मात्र गरेन अभियान पोष्टरमा मोहनचन्द्रलाई ूनेपाली नेल्सन मण्डेलाूको रुपमा प्रस्तुत गर् यो।
बहुदलीय व्यवस्था आयो । जननेता मदन भण्डारी चर्चाको शिखरमा हुनुहुनथ्यो । ०४९ सालको अन्त्यतिर कम्युनिस्ट पार्टिको युवा महासचिवको रुपमा उहाँ एमालेको महासचिव फेरी चुनिनु भयो । त्यति नै खेर दक्षिण अपि्रुकामा एक थिए कि्रस हानी- कम्युनिस्ट पार्टिका युवा महासचिव ७३ढटण्स उनी लोकप्रीय थिए र दक्षिण अपि्रुकाको संक्रमणकालिन राजनीतिलाई संस्थागत गर्न नेल्सन मण्डेलासंगै कि्रशिल थिए । उनको नृसंस हत्या भयो । जननेता भण्डारीको पनि त्यतिखेर कि्रस हानीसंग तुलना हुन थालेको थियो । केही महिना को वीच मै उहाँको पनि हत्या भयो ।
दुई नेताको हत्य भएको १६ वर्ष विति सकेको छ । दुवै देशमा उदेकलाग्दा राजनीतिक प्रयोग भएका छन्। दक्षिण अपि्रुकीहरुले रंगभेदलाई निर्मुल गरिसकेका छन् हामीले अढार्य दशक पुरानो राजतन्त्रलार्य विदा गरेका छों । उनहिरुको भागमा अलि धेरै सकारात्मकता थपिएको छ हाम्रो भागमा अझै राजनिितक जटिलता छंदै छ ।
डिसेम्बर २००७ मा सत्तारुढ अपि्रुकी नेसनल कँग्रेस एएनसी ले ५२ औं महाधिवेशन गर् यो । वर्तमान राष्ट्रपति ज्याकोव जुमा र निवर्तमान राष्ट्रपति थावो एम्वेकी २ कित्तामा उभिए । उही पार्टी उस्तै राजनिितक कद भएका दुई नेता अध्यक्षका प्रत्यसीको रुपमा उभिँदा सिङगो कार्यकर्ता पङ्ति पनि दुई किनारामा उभिन थाले । त्यसको असर पार्टी्र भित्रमात्र नभई सत्ताधारी गठबन्धन र सिङ्गो राजकीय संयन्त्रमा समेत पर् यो । यही विवादलाई ध्यानमा राखि दक्षिण अपि्रुकी कम्युनिस्टपार्टीका नेताहरुले खुल्ला पत्र नै लेखे ।
कमरेडहरु अहिलेको सन्तुलन भनेको हामीले हरेक विषयमा संगैसंगै गरेको संघर्षको प्रतिफल हो । डिसेम्वरमा हुने अपि्रुकी नेशनल कँग्रेसको ५२ औं महाधिवेशनको संघारमा आईपुग्दा ए एन सी का शाखाहरु क्षेत्र प्रान्त र राष्ट्रिय संरचनाहरुमा विभाजन र आपसी असहिष्णुता ईतिहासमै कहिल्यै नदेखिएको अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक गुटवन्दीका कारण गुप्तचर संस्था न्यायालय र सार्वजनिक संचारका क्षेत्र समेत चिन्ता लाग्दो किसिमले प्रदुषित भइहेको छ। हाम्रो उदाउँदो लोकतन्त्रका लागि क्षति पुर् याउन यती नै काफी छ र यसलाई डिसेम्बर भन्दा अघिको स्थितिमा पुर् याउन चानेचुने तरीकाले संभव देखिदैन ।
यस्तो किन भइरहेछ यो आफैमा एउटा विवादको विषय हो । तर एउटा कुरा चाँहि निश्चित छ हामी मरिगए पनि यसरी अघि बढ्न सक्दैनौं । परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्न संगसंगै जानुको हामीसँग विकल्प छैन ।
(दिशावोध- मदन भण्डारी फाउन्डेशनको प्रकाशनका लागि प्रेषि; मितिः २०६७। २। ३१ गते)